Namboarina hahatrarana ny fifandanjana tena tsara eo anelanelan'ny feo, fitoniana ary fampiasa.
Ampitao amin'ny traikefa am-peo lalina kokoa izay fehezanteny ho an'ny fihainoanao tsy manam-paharoa.
Tariby Wireless & DJ
avy amin'ny fanavaozana 46
Tena tsara feo
Mahery ny voka-bass.
Pro-10 Studio & Fampandrindrana DJ
A70 Wireless & DJ headphone (mainty)
Nividy an'ireto fonon-tanana ireto tamin'ny alàlan'i Amazon. Taorian'ny famakiana famerenana marobe marobe ary, raha nandinika ny vidin'ny head-Pro Pro-10, dia mora ny fanapahan-kevitra hividy ireo.
Ampiasain'izy ireo hiditra ao amin'ny ampli gitara aho ary hihaino ny gitara ataoko mampihatra / milalao ary mila headphone avo lenta tena ilaina. Ny amplifier dia Peavey VYPYR VIP 3 (Andriamanitra Tone), hany ka tena mila alefa ny headphone.
Tena faly aho amin'ny andiany Pro-10. Tena tsara ny kalitao fananganana, ny tendrony dia avo lenta. Tiako ny versatility ny tadin'ny tariby ary, ny headphone no tena mahazo aina izay efa notafiko.
Ny ampahany lehibe indrindra dia ny fomba fanamafisam-peo. Mba hametrahana azy fotsiny dia tsy misy dikany ny kalitaon'izy ireo. Mazava ho azy fa afaka mivoaka sy mandany $ 500 amin'ny fonon-tanana ianao nefa, handany ny volanao ianao. Ireo dia mazava, halalin'ny halalin'ny feo. Lavabe tena tery, avo lenta izay mihira, midrange mahay mandanjalanja ... Hmmm ... hay ve ny amp sa ny headphone izay milay be?
Miasa toy ny mahafatifaty
Fandraisana an-tariby A71 (mena)
Aleo aloha hampahafantatra ny tenako aho.
Izaho dia DJ matihanina nanomboka tamin'ny 1979 ary izaho no resident resident amin'ny klioba tsara indrindra any Porto (Portugal) [ianao dia vonona ny hitsidika na aiza na aiza).
Nanana telefaon-doha be tato anatin'ny taona maro lasa izay, ka tsy miraharaha ireo marika mihitsy aho.
Ny headphone DJ an'ny mpisava lalana dia fanondroana azy ireo, saingy tapaka toy ny hafa rehetra.
Tsara i Numark, Denon DJ, Senheiser, Audiotechnika .... fa tsy maharitra.
Ka rehefa nanontany ahy ny zanako lahy hoe mila telefaona vaovao vaovao aho, dia nataoko fa saika hanana fanomezana Krismasy aho ary satria izy dia praiminisitra Amazon any Alemaina, dia nijery izay natolotra aho.
Mbola tsy naheno resaka momba ny OneOdio aho, fa toa tena mangatsiaka ireo telefaona namboarina ary tena tsara ny famerenana azy, ka nolazaiko taminy fa tiako ireto (A71).
Tena TSARA AZONAO.
Na ny plastika aza tsy dia ratsy any ho any.
Ary tsara ilay feo.
Nampiasa an'i Pioneer aho rehefa nahazo ny OneOdio A71 ary lehilahy ... ny tsy fitoviana dia mahery setra.
Mahazo feo mafy aho tsy misy mpanakorontana ary marina ny bass.
Na eo amin'ny mpanara-maso ny booth (1000W) izay eo anoloako aza dia maheno mafy aho ary manazava ny lalana miverina sy mandresy ny lalao (Izaho dia sekoly taloha, tsy mampiasa ny bokotra "sync") aho.
Noho izany, ry zalahy avy amin'ny OneOdio dia hajainao tanteraka.
Email adiresy natontan'i ny fiainana manokana.
Nividy roa ny Pro 10 écouteur ho an'ny vadiko. Voalohany, dia raiki-pitia amin'ny tarehiny. Indray mandeha izy nanana azy ireo, dia raiki-pitia na dia bebe kokoa noho ny feony. Ny sasany dia manana olana momba ny Naneho plastika fanorenana. Tsy hitako izay olana raha toa tahaka ny zavatra hafa, dia hitondra ny fanananao amim-pitandremana.
Pro 10 studio headphone (Rose Gold)
tsara kalitao tsara feo ny fonon-dohany e lavorary
A9 Hybrid ANC Headphones
Headphone tsara ho an'ny vidiny
Tiako ireto headphone ireto! Ny ANC dia mangotraka any ivelany, nefa mamela anao handre feo tsara. Ny kalitao dia tena tsara ho an'ny avo sy latsaka. Ny antony fotsiny dia tsy kintana 5 izany satria nanana olana aho tamin'ny bokotra herinaratra tsy niodina taorian'ny herinandro fampiasana. Antenaina ny hanampy ny serivisy ho an'ny mpanjifa an'ity - raha tsy izany kintana 5!
A3 ANC Headphone
Mahafinaritra sy lafo vidy loha!
Nahazo feo kristaly ny headphone, na tamin'ny bluetooth na tariby mifandray. Mora miasa izy ireo ary mifanambatra amin'ireo fitaovana bluetooth hafa. Mahazo aina tsara ry zareo eo am-poto-tsofina, ary azoko ampiasaina mihitsy aza ny solomaso rehefa miasa amin'ny solosaina aho :) Mbola tsy haiko hoe hatraiza ny bateria maharitra fa hojereko indray izany any aoriana :) manoro hevitra ny mpivarotra sy ireo headphone !!!!
L6 Bass Headphones
Maivana. Maharitra. Aina. Kalitao mahafinaritra. Renao ny ampahany kely amin'ny mozika nolalaovina. Ny vidiny ihany koa ny sandany. Mividy indray an-tànana ireo fonon-dàlana ireo aho ary azo antoka fa hanoro azy ireo amin'ny namako sy ny fianakaviako. Lehibe amin'ny lafiny rehetra.
A61 ambany Latitude Headphone
Nanana izany tao amin'ny lisitry ny fanomezana aho, indrindra handao ny fotoana ary hankafizana hilamina amin'ny sidina intercontinental lava. Tsy nentiko daholo na aiza na aiza, fa nankafy ny nandravana azy ireo. Mahazo aina izy ireo, mampifandray mora foana amin'ny telefaona Bluetooth, ary manana tadim-peo lava izay mamela ahy hiditra ao anaty solosainako ary mbola miasa manodidina ny latabatro. Hitako hoe nahoana izy ireo no nivarotra!
Lehibe headphone ho an'ny vidiny kalitao tsara tsara tsara ny zava-drehetra
Pro 10 studio DJ headphone (Grey)
Izay notadiaviko fotsiny
Headphone mampitony mahafinaritra.Great feo ary vidiny tsy misy vidiny
Ireo rock headphones ity
Mijery tsara, feo tsara kalitao, Bluetooth ary manafoana ny tabataba mavitrika. Faly ny manolotra an'io vokatra io (fa tsy hampahafantatra ny adiresy mailaka imasom-bahoaka!)
Manana kalitao tsara izy ireo
Pro-30 Fantson-tanana Studio (Volafotsy)
Ny lakandrano amam-peo matevina ho an'ny baoritra kely
Efa an-taonany maro aho no tsy nivarotra finday, ary nitady finday bluetooth bluetooth tsotra fotsiny aho, rehefa nandona dokambarotra iray teo an-toerana aho, nivarotra ireo BNIB ireo tamin'ny $ 12. Tsy nanantena na inona na inona tamin'izy ireo aho dia nampifandraisiko azy ireo hanaovana fisavana fohy ary notsofina aho. Mbola tsy fantatro IZY mety hitranga izany, fa ireo lakanana ireo dia nikapoka an-doha an-doha an-dohan'ny findaiko rehetra raha resaka kalitao. My Sennheiser Momentum? Ny B&W P5? Tonga amin'ny doka misy eo an-toerana. Na tsy fikotranana aza.
Mahafatifaty REHETRA takonana
Na inona na inona nolazain'ity troll teo aloha ity dia ny hatsiaka sofina. Mahazo aina tsara izy ireo. Noraisiko izy ireo hanolo ny cushions fenitra amin'ny headset lalao y80b. Izy ireo koa dia mifanentana amin'ny pro-10, pro-30, ary ny pro-50 raha mitady hampiakatra / hanolo ny cushions amin'ny iray amin'ireny modely ireny ianao
Earpads ho an'ny Studio Pro 50
Tiako be loatra izy ireo ary nanapa-kevitra ny hividy ny Bluetooth A61 tokony ho roa andro vitsivitsy izao
Akanjo roa an-tanana
Izy ity dia kiraro mahafinaritra an-doha. Izy ireo dia milamina tsara sy malefaka. Na izany aza, toa ireo somary vazivazy ny tonon-taolana misy ny mofomamy. Ankoatra izany, io dia misy kiraro an-doha lehibe ary azo antoka fa mendrika izany.
Pro-50 Studio & Fampandrindrana DJ
Nahazo ny A 8 aho tamin'ny andro iray ary tena tsy diso fanantenana loatra izy ireo satria tena mahazo aina izy ireo ary ny fomba hitondrany ny mozika mahafinaritra dia malefaka, mazava tsara ny fihodinana bass mba hampidinana azy rehetra avy eo, hitsambikina kely ary mankafy fa tsy mbola nahare mozika aho mazava toa ahy nanomboka tamin'ny nanandramako ny OneAudio Headphones
A8 Bluetooth headphones
Lehibe izy ireo!
Nividy izany ho kilasy famokarana mozika aho ary tena mahavariana! Mahazo aina sy feno fahaizana! Azonao atao ny mampiasa azy ireo tsy misy tariby, na nandefona azy ireo miaraka amina tariby fampidirana 1/8 na 1/4 santimetatra. Izany rehetra izany dia manao izany ary amin'ny vidiny lafo! 👍
Vao haingana aho no nividy ireo ary nampiasaiko matetika. Raha ny fahitako azy dia mahagaga ry zareo!
A1 headphones Wireless （Red)
Mipetraka tsara eo an-dohako ny fonon-doha ka manarona ny sofiko tanteraka, vokatr'izany rehefa mihaino mozika ny fonon-doha dia mikitikitika tanteraka. Malalaka sy mazava ny feo ary mampiavaka ny bass. Rantsan-tanana 2 amin'ity horonana ity.
Efa nividy fonon-tanana vitsivitsy aho talohan'izay, nitady fikaon-doko DJ / Bluetooth tsara izay hitako tany amin'ny Fusion A7, nodidiako ary androany dia tonga. Wah ity zavatra ity dia mahatalanjona tena tsara feo bass, maivana ary malefaka mety tsara ary azonao atao ny DJ raha mifandray amin'ny BT ny telefaona ary tariby serivisy mitovitovy fa miasa tsara izy rehetra! Vokatra tsara!
Tena Bang Ho an'ny Baikinao!
Vao nividy izany avy amin'ny Amazon aho ary afaka milaza aho fa ireo no tena tsara indrindra amin'ny roon-doha izay napetrako. Nandeha headphone maro avy amin'ny marika toa an'i Sony sy Bose aho nefa tsy nisy nanana kalitao tsara tamin'ny vidiny ambany toy izany. Ny feo amin'ny alàlan'ny telefaona na solosaina na telefaona dia efa mandeha tsara kanefa rehefa mametraka ireo amin'ny alàlan'ny ampinga izay tena mamirapiratra ireo headphone ireo. Tena tiako koa ny lafin-javatra fanampiny tsy mila mampiasa adaptatera rehefa mifandray amin'ny zipo 6.3mm satria ny tariby izay miaraka aminy dia afaka mametaka ny fonon-tanana eo amin'ny andaniny roa. Tena mividy be ary hanoro hevitra amin'ny namako rehetra.
Headphone tonga lafatra amin'ny vidiny be
Nividy fonon-tanana avy tamin'ny amazon aho raha teo am-pitadiavana fonon-tsary bluetooth tena premium. Efa manana headphone Studio-10 aho ka nanapa-kevitra ny hanandrana izany ary am-pahatsorana fa milamina kokoa izy ireo amin'izay avy eo amin'ny studio-10 ahy. Lalina ny bass, mahatalanjona ny fiainana bateria ary ny vidiny tsy hitanao tsara intsony. Izy ireo dia ampitahaina amin'ny fonon-doha avo lenta toy ny tendro. Tiako ireo ary miaraka amin'ny headset hafa maharitra maharitra herintaona izay tsy misy famantarana ny fahasimbana na ny fahaverezan'ny asa, ataoko fa haharitra izany raha mbola maharitra ihany.
Fonosana tsotra nefa mety. Ahitana am-paosina roa, karazan-tariby roa azo ampiasaina (ho an'ny fampiasa an-tsoavaly sy DJ / studio), ary fantson-tanana mahafinaritra. Mpandrafitra mozika aho, ary nividy izany ho an'ny fifangaroan-javatra, ary efa niasa tamin'io nandritra ny telo volana aho, ary mbola sarotra amiko ny mino fa nividy vokatra tsara kalitao eo ambany $ 100. Ity vokatra ity dia mahagaga!
Ho an'ny $ 50 dia tsy misy headphone tsara kokoa. ny fonon-tanana tsara indrindra avy any
Nividy blonon headphone tamin'ny alàlan'ny amazon aho ary gaga aho noho ny kalitaon'ity fitaovana ity sy feo lehibe indrindra izay henoko saingy tsy nahita fitaovana 2 mifandray amin'ny tombontsoa an-doha miaraka amin'io fotoana io ihany aho.
A4 Wireless headphones
Vokatra sy serivisy mahafinaritra
Nividy môtôlôma tamim-pitandremana tamin'ny loham-pianakaviana aho, tamin'ny voalohany dia nisalasala aho hividy izany indrindra tamin'ny vidiny ambany. Rehefa avy nijery ilay tranokala sy hevitra vitsivitsy aho dia nanana fotoana ary faly aho nanao izany. Ny kalitao amin'ny feo dia mahavariana amin'ny vidiny ary ampitahaina amin'ny headphone avo lenta. Manana fonon-tanana sony misy kiraro izay eo amin'ny 150 eo ho eo aho ary tiako kokoa ireo vaovao ireo. Mazava ny feo ary manana karazany maro amin'ireo karazan-mozika samihafa. Mihaino rap sy metal aho ary ny bass dia tonga lafatra rap raha ny feo mazava no ahafahako mandre ny zavamaneno rehetra amin'ny hiran'ny metaly rehetra. Ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia niverina tamiko haingana momba ny tsy fitoviana vidiny eo amin'izy ireo ary mahatsikaiky ary manampy be ahy izany.
Headphone tsara indrindra amin'ity vidiny ity!
Ho 40 € ihany no hahazoanao vokatra tsara miaraka amin'ny kalitao tsara